Mourinho Ka Qosliyey Warbaahin Wax Ka Weydiisay Guuldaradii PSG
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa ku dhaliilay ciyaaryahanadiisa difaacii daciifka ahaa ee soo bandhigeen kulankii xallay ee is araga hore ee horyaalka Champions League oo PSG 3-1 kaga badisay.
Kooxda uu hogaamiyo Mourinho ayaa goolkii barbar dhaca ka dhigayay ciyaarta la timid isla qaybtii hore ee ciyaarta kadib markii uu Rigoodhe shabaqa dhigay Eden Hazard , kaasi oo u noqday gool dahab ah maadaama ay garoon aan kooda ahayn ku dhaliyeen (Away Goal).
Laakiin kooxda martida ahayd ayaa wixii intaas ka dambeeyey u muuqatay mid kala daadsan oo aan ilaashan karin qaybta dambe ee weerarku kaga socday , taas oo u suurto galisay inay laftooda gool iska dhaliyaan khalkhal dartiis , waxaana aakhirkii u quus gooyey Javier Pastore oo ka dhaliyey goolkii saddexaad.
Cadho ururtay iyo khalkhal ku dhacay tababare Mourinhona waxay keentay inuu kalmado weerar ah kula dul dhaco xidigihiisa, isagoo ku dhaliilay difaac jilicsanaan baahsan oo ka muuqatay.
Mourinho ayaa yidhi isagoo Sky SPort u waramaya “Waxay ahayd wax lagu qoslo (siduu uga dhashay goolkii saddexaad).”
“Ha i weydiin inaan taas kuu sheego ( waxa ii qorshaysan inaan ciyaaryahanada ku odhanayo), Ma samayn karo taas, waa inaan meel gooni ah ugu sheegaa ee maaha inaan fagaare ku soo bandhigo.”
“Laakiin waxaan la ciyaaraynay koox weyn oo ay ka buuxaan ciyaaryahano laacibiin ahi. khaas ahaan weeraryahanadooda waa kuwo aad u cajiib ah, waxaad ka fili kartaa inay dhaliyaan goolal amakaag ah ee kama filaysid inay kaa dhaliyaan goolashii ay dhalinayeen oo kale.
“Goolka koowaad wuxuu ahaa mid laga helay meel fudud, kubadihii koornaha ahayd markii la soo laagay, anaga ayaa weeraryahanka u gacan gallinay kubada , cidina kulama dagaalamin iyadoo uu ka qabsaday meel xasaasi ah.
“Goolka labaad wuxuu ku dhashay lugta ciyaaryahanadayda mid kamid ah, taasina waa wax iska nasiib ah.
“laakiin qaabkii kooxdu wax u difaacanaysay ma ahayn midkii saxda ahaa. Goolka saddexaad siduu nooga dhashay baa wax kasta ka yaab badnaan , sidii qosol qosol oo kale.
Cajiib: Taageere Iligiisa Ku Waayey Goolkii Uu Rashford Ka Dhalliyey Manchester City..! + Sawirro
Deschamps: “Waxay Ahayd Guul-Darro Qadhaadh”
Leicester Oo Atletico Madrid U Diiday Wax Ka Badan 1 Gool Inay Kaga Badiso
Harry Kane Oo Kuraanta Ka Dhaawacmay